eVisa Fampahalalana | Visa an-tserasera India
Fampahalalana momba ny India India
1. Ny karazana Visa Elektronika Indiana ilainao miankina amin'ny antony fitsidihanao an'i India
Raha mitsidika an'i India ianao amin'ny tanjon'ny fizahan-tany sy fitsangatsanganana dia mila izany ianao Ilay e-Visa mpizahatany ho any India.
Raha mitsidika an'i India ianao amin'ny tanjon'ny orinasa sy ny varotra dia mila izany ianao Business e-Visa ho an'i India.
Raha mitsidika an'i India ianao mba hahazoana fitsaboana dia mila izany ianao E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India.
Raha mitsidika an'i India ianao amin'ny maha mpanampy mpitsabo anao olona iray mitsabo tena eto dia mila izany ianao E-Visa ho an'ny mpitsabo ho an'i India.
2. Ny e-Visa mpizahatany ho an'i India
Ity e-Visa ity dia manome alalana elektronika hitsidihana ny firenena ireo mpitsangatsangana tonga any India ho an'ny tanjon'ny
mitsidika fianakaviana sy / na namana, na
ho an'ny fialan-tsasatra Yoga na Mazava ho azy fa yoga Mazava ho azy
Misy karazany telo amin'ity Visa ity:
Ny e-Visa mpizahatany 30 Andro, izay Visa Entry Mandroa.
Ny e-Visa mpizahatany 1 Taona izay Visa fidirana marobe.
Ny e-Visa mpizahatany 5 Taona izay Visa fidirana marobe.
ianao tsy afaka mijanona mihoatra ny 180 andro indray mandeha amin'ny iray amin'ireto karazana Tourista e-Visas ireto.
3. Ny e-Visa momba ny asa any India
mivarotra na mividy entana sy serivisy any India,
manatrika fivoriana ara-barotra,
fananganana orinasa na orinasa
nandefa lahateny tamin'ny alàlan'ny tetikasan'ny Global Initiative for Networks Network (GIAN),
fandraisana anjara amin'ny hetsika ara-barotra sy fampirantiana ara-barotra, ary
tonga eto an-tanindrazana ho manam-pahaizana na manam-pahaizana manokana momba ny tetik'asa ara-barotra sasany.
Ity Visa ity dia manan-kery mandritra ny 1 taona ary Visa fidirana marobe. Tsy afaka mijanona eto amin'ny firenena mandritra ny 180 andro fotsiny amin'ny Visa ianao.
4. Ny e-Visa ara-pitsaboana ho an'i India
Ity e-Visa ity dia manome alalana elektronika hitsidihany ny firenena amin'ireo mpitsangatsangana tonga any India mba hahazoana fitsaboana avy amin'ny hopitaly indianina. Visa mandritra ny fotoana fohy izy io izay manan-kery mandritra ny 60 andro ary Visa Triple Entry.
5. Ny e-Visa Mpanatrika Fitsaboana ho an'i India
Ity e-Visa ity dia manome alalana elektronika hitsidihany ny firenena amin'ireo mpandeha tonga any India miaraka amina marary izay handeha hitsabo tena avy amin'ny hopitaly indiana ary tokony ho efa nahazo antoka ny marary na nangataka ny e-Visa ho an'ny mpitsabo. Visa tsy maharitra ity izay manan-kery mandritra ny 60 andro ary Visa Triple Entry. Afaka mahazo ihany ianao e-Visa mpanatrika mpitsabo roa mifanohitra amin'ny e-Visa ara-pitsaboana iray.
6. Ny fihaonambe e-Visa ho an'i India
Ity e-Visa ity dia manome alalana elektronika hitsidihany ny firenena amin'ireo mpandeha tonga any India mba hanatrehana fihaonambe, seminera na atrikasa izay nokarakarain'ny minisitera na departemanta ao amin'ny Governemanta India, na Governemanta na Union State. Teritery Administrations of India, na fikambanana na PSU mifamatotra amin'ireo. Ity Visa ity dia manan-kery mandritra ny 3 volana ary Visa fidirana tokana.
7. Torolàlana ho an'ireo mpangataka ny e-Visa Indiana
Rehefa mangataka ny e-Visa Indiana dia tokony ho fantatrao ireto pitsopitsony manaraka ireto momba azy:
Azonao atao ny mangataka e-Visa indiana intelo ao anatin'ny herintaona.
Raha azonao ekena ny Visa dia tokony mangataka izany farafaharatsiny 4-7 andro alohan'ny hidiranao ao India.
Ny e-Visa dia tsy azo ovaina na hitarina.
Ny e-Visa Indiana tsy hamela anao hiditra any amin'ny faritra arovana, voaferana, na faritra lemaka.
Ny mpangataka tsirairay dia mila mangataka tsirairay ary manana pasipaoro manokana hampiharana ny e-Visa karana ary ny ray aman-dreny dia tsy afaka mampiditra ny zanany amin'ny fangatahany. Tsy afaka mampiasa antontan-taratasy fitsangatsanganana hafa ankoatry ny pasipaoronao, izay tsy afaka atao ho diplaomatika na ofisialy fa fenitra fotsiny. Mila mijanona ho manan-kery mandritra ny 6 volana manaraka farafaharatsiny manomboka amin'ny andro nidiranao ao India. Tokony hanana pejy banga 2 farafahakeliny koa hamehezana ny Mpiasan'ny Fifindra-monina.
Mila manana tapakila miverina na avy any India ianao ary tsy maintsy manam-bola ampy hamatsiana vola ny dianao mankany India.
Mila mitondra ny e-Visa aminao miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra ianao mandritra ny fotoana ijanonanao any India.
Fangatahana India Visa efa misy amin'ny Internet izao fa tsy mila fitsidihana ny masoivohon'i India.
8. Firenena izay manana olom-pirenena fahazoana manao fangatahana ho an'ny e-Visa Indiana
Ny olom-pirenena avy amin'ireto firenena manaraka ireto dia afaka mangataka amin'ny e-Visa karana. Ny olom-pirenena avy amin'ny firenena hafa rehetra tsy voatanisa eto dia mila mangataka taratasy Visa mahazatra ao amin'ny Masoivohon'i India.
9. Ireo antontan-taratasy takiana amin'ny e-Visa Indiana
Na inona na inona karazana e-Visa ampianarinao dia mila ireto antontan-taratasy manaraka ireto ianao manomboka:
Kopia elektronika na notarafina an'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoronao.
Dika mitovy amin'ny sary miloko pasipaoro nosoratanao farany (ny tarehy ihany, ary azo alaina amin'ny telefaona izany), adiresy mailaka miasa, ary carte debit na carte de crédit amin'ny fandoavana ny sarany fangatahana. Jereo ny India sy Visa Fepetra takiana Raha mila tsipiriany fanampiny.
Tapakila miverina na avy any ivelany.
Hanontaniana fanontaniana vitsivitsy ihany koa ianao hamaritana ny fahaizanao mahazo ny Visa toy ny toerana misy anao ankehitriny sy ny fahafahanao mamatsy vola ny dia.
Mandritra ny famenoana ny fangatahana fangatahana ho an'ny e-Visa karana dia tokony ho azonao antoka fa mifanaraka amin'ny fampahalalana mitovy amin'ny hita ao amin'ny pasipaoronao ireto pitsopitsony manaraka ireto:
Daty sy toerana nahaterahany
Ankoatr'ireo, miankina amin'ny karazana e-Visa angatahinao, dia mila antontan-taratasy hafa koa ianao.
Ho an'ny Business e-Visa:
Ny antsipirian'ny fikambanana indianina na foibe fivarotana na fampirantiana izay hotsidihinao, ao anatin'izany ny anarana sy ny adiresin'ny referansa karana
Taratasy fanasana avy amin'ny orinasa Indianina.
Ny karatrao na ny sonia mailakao ary koa ny adiresy tranokala.
Raha ho tonga any India ianao handefa lahateny amin'ny Global Initiative for Academic Networks (GIAN) dia mila manome ny Fanasana avy amin'ny institiota izay hampiantrano anao ho mpampianatra mpitsidika vahiny ianao, kopian'ny kaomandy sazy ao amin'ny GIAN navoakan'ny Ivon-toerana mpandrindra nasionaly, dia ny. IIT Kharagpur, ary kopian'ny synopsis ny fampianarana izay horaisinao ho mpampianatra ao amin'ny institiota fampiantranoana.
Ho an'ny e-Visa ara-pitsaboana:
Kopian'ny taratasy iray avy amin'ny Hopitaly Indiana izay tadiavinao fitsaboana (ny taratasy dia tokony hosoratana eo amin'ny lohanao ofisialin'ny hopitaly).
Ho takiana aminao ihany koa ny hamaly ny fanontaniana rehetra momba ny Hopitaly Indianina izay ho tsidihinao.
Ho an'ny e-Visa mpitsabo:
Ny anaran'ny marary izay tsy maintsy tompon'ny Visa Visa.
Ny laharana Visa na ID Application an'ny mpiandraikitra ny Visa Medical.
Ny antsipirihany toy ny Passport Number of the Medical Visa holder, ny daty nahaterahan'ny tompon'ny Visa Medical, ary ny Nationality of Medical Visa.
Ho an'ny e-Visa amin'ny kaonferansa:
Fanadiovana ara-politika avy amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny (MEA), Governemanta Inde, ary tsy azo atao ny fanadiovana hetsika avy amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny (MHA), Governemanta Inde.
10. Fangatahana fitsangatsanganana ho an'ireo olom-pirenena avy amin'ny firenena voankazo mavo
Raha olom-pirenena na mitsidika firenena voan'ny Fever Yellow ianao dia mila mampiseho izany Karatra vakin-jiro mavo. Mihatra amin'ireo firenena manaraka ireto izany:
Ireo firenena any Amerika atsimo
11. Seranan-tsambo nahazoana alàlana
Mandehandeha any India amin'ny alàlan'ny e-Visa ianao, raha tsy amin'ny alàlan'ireto lahatsoratra manaraka ireto:
12. Ny fangatahana ny Indiana e-Visa
Ianao dia afaka mangataha amin'ny e-Visa Indiana amin'ny Internet eto. Raha vantany vao manao izany ianao dia hahazo fanavaozana ny momba ny fangatahanao amin'ny alàlan'ny mailaka ary raha ekena dia halefa amin'ny mailaka koa ny visa elektronika. Tsy tokony hahita fahasahiranana amin'ity dingana ity ianao fa raha mila fanazavana ianao dia tokony India sy Birao Fanampiana Visa ho fanampiana sy fitarihana. Latest Vaovao Indiana Visa dia afaka manome anao vaovao farany.